October 13, 2019 - Myitter
ကမ္ဘာ့ပေါ်က မီဒီယာတွေ အသီးသီးက ၀ိုင်းဝန်း ချီးကျူး ကြတော့မယ့် အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ ပွဲအပြီး သုံးသပ်ချက်များ…
October 13, 2019 Myitter 0
ကမ်ဘာ့ပျေါက မီဒီယာတှေ အသီးသီးက ၀ိုငျးဝနျး ခြီးကြူး ကွတော့မယျ့ အောငျလ အနျဆနျး ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ နဲ့ ပှဲအပွီး သုံးသပျခကျြ One Century ပွိုငျပှဲကွီး ရဲ့ အဓိက ပှဲစဉျကွီး ဖွဈတဲ့ အောငျလ အနျဆနျး နဲ့ ဘရနျဒနျ ဗီရာ […]
အောင်လအန်ဆန်ကို အားပေးကြမ်း ချစ်ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ အားကစားကိုချစ်တာထက် ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ အောင်လကိုချစ်တာ နိုင်စေချင်တာ ဒီvideoလေးလဲ ရှယ်ပေးကြပါဗျာ အောင်လများ သူ့ကိုဘယ်လိုထိအားပေးတယ်ဆိုတာ သိများ သိမလားပေါ့လေ ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ပါစေဗျာ ပွဲတိုင်းလဲ အောင်မြင်ပါစေ we love AungLa unicode version […]
ဘရန်ဒါဗီရာကို အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ကာကွယ်လိုက်နိုင်ပြန်တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လ
ဘရန်ဒါဗီရာကို အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ကာကွယ်လိုက်နိုင်ပြန်တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လ One Championship ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းနဲ့လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် တန်း မှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ် ၂ ခု ရရှိထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ ယနေ့ညမှာ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအတွက် စိန်ခေါ်သူ ဟဲဗီးဝိတ်တန်းချန်ပီယံ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား ဘရန်ဒါဗီရာနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ […]
အောင်လ နဲ့ ဗီရာပွဲ စပါပြီ တိုက်ရိုက် (live)
AUNG LA N SANG VS. BRANDON VERA – CENTURY PART II တိုကျရိုကျကွညျ့ရနျ MAIN EVENT: Light Heavyweight World Championship Aung La N Sang vs. Brandon Vera […]
အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ဒိုင်ပွဲရပ် ပွဲသိမ်း နိုင်ခဲ့တယ် ပွဲစဉ်တွေ နှင့်တူ အောင်လနဲ့ ဗီရာပွဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရအောင်
အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ဒိုင်ပွဲရပ် ပွဲသိမ်း နိုင်ခဲ့တယ် ပွဲစဉ်တွေ နှင့်တူ အောင်လနဲ့ ဗီရာပွဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရအောင် Zawgyi အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ဒိုင်ပွဲရပ် ပွဲသိမ်း နိုင်ခဲ့တယ် ပွဲစဉ်တွေ ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ။ အောင်လအန်ဆန်ဟာ မြန်မာ့စပါးအုံး ဆိုပြီး အဖမ်း၊ အချုပ်မှာ နာမည်ကျော်သူပါ။ဒါပေမဲ့ အလဲထိုး၊ အလဲကန်၊ အနိုင်ချုပ် […]
အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ ပွဲ တိုက်ရိုက် (live)….
“သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့အဘိဓမ္မာအကြောင်း သိကောင်းစရာများ”
“သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့အဘိဓမ္မာအကြောင်း သိကောင်းစရာများ” (၁)။အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို မြတ်စွာဘုရားသည်၆ ဝါအလွန် ၇ ဝါ အရောက် သက်တော် ၄၂ နှစ်အရွယ်တွင်တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ (၂)။မယ်တော်မိနတ်ကို ကျေးဇူးဆပ်လိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဟောကြားတော်မူပါသည်။ (၃)။မယ်တော်မိနတ် အမှူးပြုသောနတ်ဗြဟ္မာပရိသတ်တို့အား ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ (၄)။ဝါတွင်းသုံးလ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာမျှဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ (၅)။ မြတ်စွာဘုရားသည် […]
ကျောင်းတစ်ခုလုံး မီးလောင်ပြာကျခဲ့ သော်လည်း လုံးဝထိခိုက်မှူ မရှိသည့် အံဖွယ်မီးကွင်းဘုရား…….
ကျောင်းတစ်ခုလုံး မီးလောင်ပြာကျခဲ့ သော်လည်း လုံးဝထိခိုက်မှူ မရှိသည့် အံဖွယ်မီးကွင်းဘုရားby KZ T in ကြားသိရသမျှ လောကမှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာ ထူးဆန်းမှုတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲခရိုင် ၊သီပေါမြို့နယ်က မိုင်းလင်းကျေးရွာမှာ ရှိတဲ့ မိုင်းလင်းဘုန်းကြီးကျောင်း အခန့်မသင့်လို့ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံး […]
ဘ၀တွေခါးလို့ အကြွေးလေးနဲ့ ထိုင်းသွားမိပါတယ် အကြွေးမကြေ ရုပ်အလောင်းသာ ပြန်လာတဲ့ မြန်မာလုပ်သားရဲ့ ဇနီးပြောပြတဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ဘ၀ဆိုးရယ်.
ဘ၀တွေခါးလို့ အကြွေးလေးနဲ့ ထိုင်းသွားမိပါတယ် အကြွေးမကြေ ရုပ်အလောင်းသာ ပြန်လာတဲ့ မြန်မာလုပ်သားရဲ့ ဇနီးပြောပြတဲ့ ဘ၀ဆိုးရယ်. ထိုင်းရောက်တာ(1 ) နှစ်မပြည့်သေးဘူးတဲ့ ကျန်ရစ်သူဇနီးကပြောတယ်အခုလမှ တက်လာရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်လေးခုမိတုံး အမျိုးသားကသေဆုံးသွားတော့ကျွန်မတို့ မိသားစုဘယ်လိုရပ်တည်ရမလဲကျောင်းသား တွေလဲပညာ​ရေးကမပြီးဆုံးသေးဘူးအခု စာမေးပွဲအချိန်ဆိုတော့ကလေးတွေ အသိမပေးရသေးဘူးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သတိကြီးကြီးနဲ့လုပ်ကြပါလမ်းဘေးမှာ လုပ်နေရတာအချိန်ရှိသလောက်ဝဏ္ဏတွေ ဖိုမင်တွေကြောက်ရထိုင်းစကားနားမလည် တာကတပိုင်း အလုပ်ပြီးလို့အခန်း ပြန်ရောက်မှစိတ်အေးရတယ် […]
အောင်လအန်ဆန်ပွဲ One championship ပွဲများကို တိုက်ရိုက် live ကြည့်ရန်
အောင်လအန်ဆန်ပွဲ One championship ပွဲများကို တိုက်ရိုက် live ကြည့်ရန် အောင်လအန်ဆန်ပွဲ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု့မည် မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သား ပရိသတ်များအားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ပဒေသာ မီဒီယာအဖွဲ့မှ ဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ One Championship မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသော Live ပွဲများကို ကြည့်နိုင်ရန် အောက်တွင် […]